Woqooyiga Ameerika - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Ameerikada waqooyi)
Coordinates: 48°10′N 100°10′W﻿ / ﻿48.167°N 100.167°W﻿ / 48.167; -100.167
Waqooyiga Ameerika (; ) waa qaarada shanaad ee ugu wayn deegaanda dhulka. Qaaradani waxaa ku yaala sadex wadan oo kali ah, kuwaasi oo kala ah: Waqooyiga Ameerika waa mid ka mid ah guud ahaan Waqooyiga Xeebta iyo ku dhowaad dhammaanba qaybta Galbeedka Galbeed; waxaa sidoo kale loo tixgeliyaa qaar ka mid ah inay noqdaan jihaad dhinaca waqooyi ee Ameerika.   Waxaa xuddun u ah waqooyiga by Arctic Ocean, bari bari by Atlantic Ocean, galbeedka iyo koonfur by Badbaadada Pacific, iyo koonfur bari ee South America iyo badda Caribbean.
Waqooyiga Ameerika waxay ka kooban tahay qiyaastii 24,709,000 oo kiilomitir oo isku wareeg ah (9,540,000 oo mayl laba jibaaran), qiyaastii 16.5% dhulka dhulka iyo 4.8% wadarta guud. Waqooyiga Ameerika waa waddanka saddexaad ee ugu weyn adduunka, ka dib Asia iyo Afrika,  iyo afraadkii dadwaynaha ka dib Asia, Afrika, iyo Yurub. Sanadkii 2013, dadkeeda waxaa lagu qiyaasay 579 milyan oo qof oo ku nool 23 gobol oo madaxbannaan, ama qiyaastii 7.5% dadweynaha adduunka, haddii jasiiradaha ku dhow (gaar ahaan Kariibiyaanka) lagu daro.
Waqooyiga Ameerika waxaa soo gaadhay dadkoodii ugu horreeyay ee bini'aadamka intii lagu jiray xilligii nasashadii ugu dambaysay, iyada oo la mariyey buundada Bering Land oo ku dhow 40,000 ilaa 17,000 oo sano ka hor. Waqtiga loogu yeero Paleo-Hindiya waxaa loo qaaday si uu u sii socdo illaa 10,000 oo sano ka hor (bilowga wakhtigii hore ee Mesaic ama Meso-Indian). Heerka Classic ayaa qiyaastii qarniyadii 6aad ilaa 13aad. Xilligii hore ee Columbus wuxuu ku dhammaaday 1492-kii, iyo guuritaanka transatlantic-soo-galayaasha reer Yurub intii lagu jiray da'da Discovery iyo xilliga Casriga ee Hore. Maaddooyinka dhaqameed iyo qowmiyadeed ee maanta jira waxay ka tarjumayaan noocyada kala duwan ee isdhexgalka ee u dhexeeya gumeysiga yurub, dadka asaliga ah, addoonada Afrika iyo faracadooda.
Saamaynta Yurub waa kuwa ugu xoogan qaybaha waqooyiga ee qaaradda iyada oo dadka asaliga ah iyo Afrikaanka ay saameyn ku yeeshaan koonfurta .Continue the history of colonialism, badankooda Waqooyiga Ameerika waxay ku hadlaan Ingiriis, Isbaanish ama Faransiis iyo bulshooyin iyo dawlado caadi ah caadooyinka.
Official Somali Name
English long name
Domestic short names
Antiiguwaa iyo Barbadhuuwa[n 1] Antigua and Barbuda St. John's East Caribbean dollar
Bahaamas[n 1] Commonwealth of The Bahamas Nassau Bahamian dollar
Barbeydhus[n 1] Barbados Bridgetown Barbadian dollar
Baliiz[n 1][n 2] Belize Belmopan Belize dollar
Ottawa Canadian dollar
Kosta Riika[n 2] Republic of Costa Rica San José Costa Rican colón
Kuuba Republic of Cuba Havana Cuban peso, Cuban convertible peso
Dominika[n 1] Commonwealth of Dominica Roseau East Caribbean dollar
Jamhuuriyada Dominikaana[n 2] Dominican
Santo Domingo Dominican Peso
El Salfatoor[n 2] Republic of El Salvador
San Salvador United States dollar
Garnaada[n 1] Grenada St. George's East Caribbean dollar
Guwaatemaala[n 2] Republic of Guatemala Guatemala City Guatemalan quetzal
Ha-iiti[n 1] Republic of Haiti Port-au-Prince Haitian gourde
File:Flag of Honduras (2008 Olympics).svg Honduuras[n 2] Republic of Honduras Tegucigalpa Honduran lempira
Jamayka[n 1] Jamaica Kingston Jamaican dollar
Mehiko[n 3] United Mexican States Mexico City Mexican Peso
Nikaraaguwa[n 2] Republic of Nicaragua Managua Nicaraguan córdoba
Baanama Republic of Panama
Panama City Panamanian balboa, United States dollar
Santi Kitis iyo Nafiis[n 1] Federation of Saint Kitts and Nevis
Federation of Saint Christopher and Nevis Basseterre East Caribbean dollar
Saanti Luusiya[n 1] Saint Lucia Castries East Caribbean dollar
Saanti Finsanti[n 1] Saint Vincent and the Grenadines Kingstown East Caribbean dollar
Trinidad iyo Tobaygo[n 1] Republic of Trinidad and Tobago Port of Spain Trinidad and Tobago dollar
Mareykan[n 3] United States of America Washington, D.C. United States dollar
Woqooyiga Ameerika waa qaarad dhacda qeybta waqooyi ee Dhulka. Waxa dhinaca waqooyi ka xiga Badweynta Arktik, dhinaca bari waxaa ka dhaca Waqooyiga Badweynta Atlaantik, dhanka koonfurbari waxaa ka dhaca Bada Kaaribiyaanka, waxaa koonfurta iyo galbeedka ka dhaca Badweynta Baasifiga; halka Qaarada Koonfur Ameerika ka xigto koonfurbari. Guud ahaan, qaarada Waqooyiga Ameerika waxay ku fadhidaa dhul baaxadiisu le'eg yahay 24,709,000 square kilometers (9,540,000 square miles), taasi oo u dhiganta 4.8% oogada dunida ama ilaa 16.5% baaxada qaaradaha. Tirokoob dadka ah oo la sameeyay Luuliyo 2008, waxaa qaaradan ku noolaa dad gaadhaya 529 milyan. Dhinaca kale, qaarada Waqooyiga Ameerika waa tan sadexaad ee ugu weyn qaaradaha aduunka; waxaa ka wayn kaliya Aasiya iyo Afrika. Sidoo kale qaaradani waa mida afaraad ee ugu dadka badan; waxaa ka horeeya Aasiya, Afrika, iyo Yurub. Qaarada Waqooyiga Ameerika iyo Koonfur Ameerika waxaa loo yaqaanaa Ameerika, taasi oo ah magac ay wadaagaan.
Sida ku xusan taariikhda, labadan qaaradood waxaa loogu magac-daray nin sahamiye ahaa oo u dhashay wadanka Talyaaniga kaasi oo magaciisa la odhan jirey Amerigo Vespucci. Ninkani wuxuu qaaradahan sahan ku tagay wakhtiyadii u dhaxaysay 1497 iyo 1502.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Woqooyiga_Ameerika&oldid=219438"
Last edited on 13 Oktoobar 2021, at 10:55
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 13 Oktoobar 2021, marka ee eheed 10:55.